Vaovao - Manambatra hery hiadiana amin'ny toe-javatra misy ny valanaretina
Ny tolakandron'ny 12 febroary, Rao Jianming, sekreteran'ny vondrona antoko ary filoha lefitra mpanatanteraky ny fikambanan'ny sendika Jiangxi, dia niditra lalina tao amin'ny dokotera Sanxin mba hanadihady ny asa fisorohana sy fanaraha-maso ny valanaretina, ary tamin'izany fotoana izany dia nandefa 50000 yuan an'ny vola fampiononana. Zhang Yilin, filohan'ny tale jeneralin'ny orinasa, dia nampandre ny filohan'ny orinasa, Peng Yilin, momba ny asan'ilay orinasa. Izy koa dia mpikambana ao amin'ny Komity maharitra ao amin'ny komity jeneralin'ny sendikan'ny Vondron'olona Sinoa, Andriamatoa Wu Yufeng, filoha lefitry ny komity maharitra ao amin'ny komitin'ny antoko ankapobeny ao amin'ny kongresin'ny vahoaka ao amin'ny Repoblikan'i Sina, filoha lefitry ny komity mijoro ao amin'ny komity jeneralin'ny sendikan'ny Vondron'ny Vondrom-bahoakan'ny Repoblika China.
Taorian'ny famotopotorana ny zava-niseho, ny sekretera Rao Jianming dia niahiahy indrindra momba ny fiarovana ny mpiasan'ilay orinasa. Voalohany indrindra dia nanontany izy hoe inona ny fepetra noraisin'ny orinasa hisorohana sy hifehezana ny trangan'aretina, ary firy ny mpiasa niverina miasa, indrindra eo amin'ny sehatry ny famokarana. Zhang Lin, filohan'ny sendikan'ny orinasa dia nanome tatitra antsipiriany tsirairay. Miaraka amin'ny fanampiana sy tari-dalan'ny departemanta mifandraika amin'ny tanàna sy ny faritany (Zone Development) dia nanohy tamin'ny fomba ofisialy ny famokarana syringe dialyse, dialyzer ary vaksiny ny orinasa ny 31 Janoary.
Taorian'ny fihainoana ny tatitra momba ny asan'ny orinasa momba ny fitantanana henjana ny mpiasa ao anatiny sy ivelan'ny orinasa, ny fitiliana ny hafanan'ny mpiasa isan'andro, ny fanamafisana ny lazany ny fisorohana sy ny fanaraha-maso ny valanaretina ary ny fizahana eny an-toerana, ny sekretera Rao Jianming dia nanamafy ny fanahin'ny fanoloran-tena feno ny mpiasa eo alohan'ilay orinasa amin'ny fisorohana ny valanaretina, ary nanentana ny tsirairay izy mba hijery tsara ny fiarovana azy ireo ary hiantoka ny fiarovana azy ireo.
Nandritra ny fizotry ny famotorana sy ny fiaraha-miory, ny Sekretera Rao Jianming dia nanamafy fa: tokony hampifangaro ny eritreritsika sy ny fihetsitsika amin'ny fanahin'ny kabary sekretera jeneraly Xi Jinping isika, hanatsara ny fahatsiarovan-tena amin'ny ankapobeny sy ny fahatsapana ankapobeny, ary hahatakatra tsara ny andraikitry ny fisorohana sy ny fifehezana ny valanaretina, ary manambatra hery matanjaka hiadiana amin'ny valanaretina. Miaraka amin'ny ezaka ifarimbonana sy ezaka iarahana, afaka mandresy amin'ny ady amin'ny fisorohana sy ny fanaraha-maso ny valanaretina isika, ary hiaro ny fiarovana ny ain'ny vahoaka sy ny fahasalamany.
Fotoana fandefasana: Jan-22-2021